ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ Archives - Page4of5- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ချောင်းမဆိုးတဲ့ တီဘီ လူတော်တော်များများသိကြတာ တီဘီဆိုလျှင် အဆုတ်ရောင်တီဘီ၊ ချောင်းဆိုးမယ်၊ လူတွေကို ကူးစက်မယ်၊ တီဘီရောဂါဝေဒနာသည်ဆို ဝေးဝေးကရှောင်မယ်၊ သူအသုံးပြုထားတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ထိတွေ့ရမှာကြောက်ရွံနေကြမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဆုတ်တီဘီဟာ လေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တီဘီ (Tuberculosis)…
ပင်မဆဲလ်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ Stem Cells ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် မူလအရင်းအမြစ်ဆဲလ်ဆိုပြီး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာသင်ရဖူးပါတယ်။ ဆဲလ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာကို တစ်ရှုးဟုခေါ်ကြောင်း တစ်ရှုးများဖွဲ့စည်းထားလျှင် Organ အစိတ်အပိုင်းဟုခေါ်ပြီး Organ များဖွဲ့စည်းထားလျှင် System အဖွဲ့အစည်းဟုခေါ်ကြောင်းကို သင်ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါဆိုလျှင်…
H1 N1ကပေးသော ဝေဒနာများ
H1 N1ကပေးသော ဝေဒနာများ နှစ်စဉ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဒုက္ခပေးနေသော ရောဂါကပ်ဆိုးတစ်ခု ရှိပါတယ် ဒါကတော့ တုပ်ကွေး လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါပါ ပျံ့နှံကူးစက်နှုန်း ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မြင့်မြားပြီး သေဆုံးနှုန်းလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်မား လာနေပါတယ် လူပေါင်း ၈၀၀၀၀ နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့…
ပိုးမွှာများ လွယ်ကူစွာ မပျံ့နှံ့ဖို့ ချောင်းကို စနစ်တကျ အုပ်ဆိုးစို့..
ပိုးမွှာများ လွယ်ကူစွာ မပျံ့နှံ့ဖို့ ချောင်းကို စနစ်တကျ အုပ်ဆိုးစို့.. ဒီလိုမိုးရွာသီချိန်မျိုးမှာ .. ရုတ်တရက်မိုးရွာတာမျိုးကြောင့် မိုးမိခြင်း၊ သာမန်လျှံကာ မိုးဖွဲဖွဲထဲ သွားမိပြီး နောက်နေ့တွေမှာ… အအေးမိ၊ တုတ်ကွေး၊ နှာစေးချောင်ဆိုး စသည်ဖြင့် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်… ဒီလို ဖျားနာပြီးနောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက…
အအေးမိရုံလား တုပ်ကွေးဖြစ်တာလား ? မိုးမိတဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ နှာစေးချောင်းဆိုးပြီး ကိုက်ခဲ ပြီး ထလာမယ်ဆိုရင် အအေးမိပြီပေါ့။ရိုးရိုးအအေးမိတာလား တုပ်ကွေးလား ဆိုတာ ဘယ်လို ခွဲခြားရပါ့မလဲ။တကယ်တော့ အအေးမိတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက တုပ်ကွေးလောက် မပြင်းထန်ပါဘူး။ အအေးမိတာက တုပ်ကွေးထက် ရက်တိုပါတယ်။တုပ်ကွေးကတော့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပြီး အဆုတ်ရောင်တာတွေအထိ…
” B ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ လုံလောက်ပါရဲ့လား “ အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရောဂါ (Hepatitis B ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့် အသည်းရောင် Bပိုးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တကျထိုးဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးက မိမိကို ကာကွယ်မှှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်ဖို့ သတိပြုရမယ့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။…
“ ခွေးရူးရောဂါနှင့်အမေးများသောမေးခွန်းများ “ ခွေးရူးနှင့် ခွေးကောင်း မည်သို့ ခွဲခြားနိုင်သနည်း? ခွေးရူး ၂မျိုး ရှိပါသည်။ ၁။ ကြမ်းတမ်းသော ခွေးရူး၏ လက္ခဏာများမှာ ခွေး၏ အနေအထိုင် ပြောင်းလာခြင်း အကြောင်းမဲ့ ပြေးလွှားနေခြင်း တစ်နေကုန် ဟောင်နေတတ်ခြင်း တစ်ခုခုကို…